mairie-antananarivo – Fanadiovana faobe teo Mahamasina sy ny manodidina
Fanadiovana faobe teo Mahamasina sy ny manodidina
administrateur 29 jona 2018 Commentaires fermés
Asa andavanandron’ny kaominin’Antananarivo Renivohitra (CUA) ny fanadiovana ny tanàna. Anisan’ny tena anton’asan’ny fiadidiana ny tananan’Antananarivo ny fanadiovana ny tanàna; ka nitohy androany maraina ny fanadiovana faobe izay nataon’ny CUA, ny mampiavaka an’ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy natao izay fomba rehetra namerenana tamin’ny laoniny ny fahadiovana taorinan’iny fetim-pirenena iny. Nisy araka izany ny fanentanana ireo mpiasa rehetra teo anivon’ny CUA, nifanampy sy nifanolo-tanana, nanatanteraka izany fanadiovana izany satria nahatsapa tokoa izy ireo fa manana adidy sy andraikitra, ary ny fahatsapana fa zava-dehibe tokoa ny fahadiovana. Anosy, Mahamasina sy ny manodidina no nosafidiana manokana tamin’ity anio ity satria noho izy feno mpivarotra sy itoeran’ny loto.
Anisan’ny tafiditra ao amin’ny fanadiovana faobe androany ihany koa ny fanabeazana ireo mpivarotra mba hanaja ireo fepetra rehetra mifandraika amin’ny varotra momban’ny fandaminana sy fahadiovan’ny entana sy ny sakafo izay varotany. Nitatra mankany amin’ny RN7 sy RN1 ka hatrany amin’ny CENAM ny fanadiovana androany satria tafiditra ao anatin’ny fiadidiana ny tanànan’antananarivo ireny toerana ireny.
Tafiditra indrindra tao anatin’ny fanadiovana faobe ihany koa ny fanadiovana natao teny amin’ny toby fiantsonan’ny fiara Fasan’ny Karana omaly maraina, ka ny ekipan’ny ESA na ny “Equipe Spécialisée en Assainissement” no nisahana ny fanadiovana.
Izany Rehetra izany no natao, dia mba ho fitsinjovana hatrany ny mpiara-belona, ho fanajana ny fahadiovana ary mba hisian’ny filaminana eto Antananarivo Renivohitra.
Nitarika izao fanadiovana tanàna faobe izao ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna, kolonely Emilien Ramboasalama sy ny sekretera jeneralin’ny Kaominina, Heriniaina Razafimahefa.